Archives des Faits-Divers - Page 1168 sur 1370
Andravoahangy : Karaoke notafihana jiolahy 10 mitam-piadiana
Bandy teo amin’ny 10 teo, nitondra fitaovam-piadiana no tonga nandrava karaoke iray tetsy Andravoahangy, ny alarobia alina teo. Raha ny voalazan’ireo manodidina, dia tany ho any amin’ny 10 ora alina tany, no niseho ity fanakorontanana niampy sakoroka ity. Tsy nanam-po na inona na inona ireo olona tonga nirevy tao amin’ity karaoke iray ity, satria dia…
Antanimena : Toeram-pivarotana voaroba, lasa ny 2 tapitrisa ariary
Toeram-pivarotana kojakoja fanaovan-trano, tsy lavitra ny toeram-pisakafoanana malaza eo Antanimena ambany, indray no lasibatry ny jiolahy omaly. Vola mitentina 2 tapitrisa ariary no lasan’ireo olon-dratsy mirongo fitaovam-piadiana tamin’izany araka ny vaovao voaray. Raha ny fantatra hatrany dia tany ho an’ny 4 ora hariva tany ho any no nisehoan’ity fanafihana ity ary mbola nivoha soa aman-tsara…
Toliara : 42 ossements humains découverts dans un sac
Tôt hier matin, des passants avaient découvert 42 ossements humains, os longs, dans un sac en plastique de couleur verte dans le « fokontany » d’Ankiembe-Bas Toliara. Il était 6 heures et 30 minutes. Curieux, quelques-uns ont osé ouvrir le sac en question, abandonné non loin d’une maison d’habitation. Une découverte qui les a laissés sans voix.…
Antsohihy : Fiara namono olona, maty voarasarasan’ny olona ilay mpamily
Nitrangana fitsaram-bahoaka niharo habibiana indray tany amin’iny faritra Antsohihy iny, ny talata lasa teo. Araka ny vaovao voaray dia matin’ny fitsaram-bahoaka ny mpamily ny fiara iray rehefa avy namono olona tamin’ny lozam-pifamoivoizana. Ny loharanom-baovao no nahafantarana fa somary nandeha mafy ihany ity fiara ity ary tamin’izany no nisy posy nitsivalana ny lalana teo amin’ny toerana…
#Anosizato. « Epicerie » notafihana efa-dahy, lasa ny « versement ». Nisehoana fanafihana mitam-basy ihany koa ny teny amin’ny faritra Anosizato iny omaly hariva. Fivarotana enta-madinika no lasibatry ny jiolahy efa-dahy mirongo basy. Vola nahatratra teo amin’ny 3 hetsy mahery teo no lasan’izy ireo tamin’izany raha ny loharanom-baovao. Tonga teny an-toerana nanao ny famotorana ny mpitandro filaminana, izay tsy…
Polisim-pirenena : Nahazo môtô efatra amin’ny orinasa tsara sitrapo
Môtô vaovao miisa efatra marika Haojue, miteti-bidy eo amin’ny 8 tapitrisa ariary mahery teo no natolotra orinasa iray tsara sitrapo avy etsy Behoririka, ho an’ny polisim-pirenena omaly. Entina hanampiana ireo fitaovana ampisain’ireto mpitandro filaminana amin’ny fanatanterahana ny asany manoloana ny fandrindra ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra ireto fitaovana ireto raha ny voalazan’ny ministry ny filaminam-bahoaka, nandray…
Fifohana rongony : Olona enina voasambotra
Olona enina indray izao no fantatra fa nosamborin’ny polisy miady amin’ny fianahan’ny zava-mahadomelina, omaly faha-28 oktobra tamin’ny 12 ora sy sasany. Teny Ambatonakanga, olona efatra no sarona teo am-pifohana rongony. Nahatratrarana fonosana rongony lehibe tany amin’izy ireo. Ny iray no mandeha mividy izany 2 000 ariary ary dia fohana miaraka avy eo. Somary mangina ilay toerana…
Toliara : Ramatoa 50 taona niteraka bibilava, mosavin’olona
Tsy mampino ! Renim-pianakaviana iray mananika ny faha-50 taonany, monina any Befanamy, kaominina Miary, distrikan’i Toliara II, no niteraka bibilava nirefy 35 cm, afak’omaly antoandro tokony ho tamin’ny 11 ora tany ho any, tao amin’ny fokontany Betania-Ouest Toliara. Raha ny fanazavana azo dia efa ela ity ramatoa ity no narary. Efa nodidiana tany amin’ny hopitaly nefa…
Ivato : Adin’ny mpivady, zandary iray maty voatrobaky ny bala
Nandriaka ny rà teny Imotro Ivato Seranana omaly vao maraina. Raha ny fantatra teny an-toerana dia adin’ny mpivady izy ity, kanefa dia niafara tamin’ny fahafatesan’ny iray. Zandary kilasy faharoa, 26 taona, avy amin’ny Gsis, no maty voan’ny bala teo amin’ny lohany. Naratra noho ny daroka nahazo azy kosa ramatoa vadiny, izay mbola vao 24 taona…
Association Ahmadiyya Madagascar : Des opérations cataractes gratuites
Après avoir œuvré dans des actions sociales, qui ont été d’une aide bénéfique aux familles les plus démunies de certains quartiers des grandes villes de Madagascar, l’Association musulmane Ahmadiyya de Madagascar offre pour cette fois-ci, des soins gratuits au gens souffrant de carataracte. Ainsi, selon le missionnaire Mujeeb Ahmad, le répresentant national de cette association…
← Précédente 1 … 1 167 1 168 1 169 … 1 370 Prochain &arr;